गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » यो दिन भुलेर पनि पिपलको पूजा नगर्नुहोस्, बर्बाद हुनेछ, के छ यहाँ पुरा कथा जान्नुहोस्
सनातन धर्ममा पिपल पूजाको विशेष महत्व छ । यसको पूजा गर्नाले अनेक प्रकारका ग्रह दोष शान्त हुनुका साथै भगवान विष्णु र माता लक्ष्मीको कृपा पनि प्राप्त हुन्छ ।
यस कारणले जीवनमा सुख–समृद्धिको कहिल्यै कमी हुँदैन। तर के तपाईलाई थाहा छ हप्तामा एउटा यस्तो दिन पनि हुन्छ जसमा पीपलको पूजा गर्न पूर्ण वर्जित छ । त्यो दिन पीपलको पूजा गरे नाश हुने जनविश्वास छ ।
आउनुहोस् ज्योतिष तथा वास्तु विज्ञबाट जानौं कुन दिन हो र यसको पछाडिको कारण के हो ?
धार्मिक ग्रन्थका अनुसार जब समुन्द्र मन्थन भइरहेको थियो, त्यसबेला देवी लक्ष्मीको आगमन हुनुअघि उनकी जेठी बहिनी अलक्ष्मी अर्थात् (जेठी वा गरिब) को जन्म भएको थियो।
दुई दिदीबहिनीहरू देखा परेपछि बस्नको लागि कुनै निश्चित ठाउँ थिएन। तब माता लक्ष्मी र उनकी जेठी बहिनी पुरी भगवान विष्णुकहाँ गइन् र उनलाई भनिन्, हे विश्वका भगवान, कृपया हामीलाई बस्ने ठाउँ दिनुहोस्।
तब भगवान विष्णुले भन्नुभयो कि तिमी दुबै पीपलको रूखमा बस्नु पर्छ। त्यसपछि दुवै दिदीबहिनी पिपलको रुखमा बस्न थाले । तर जब भगवान विष्णुले लक्ष्मीसँग विवाह गर्न चाहन्थे, तब लक्ष्मीले जेठी बहिनी दरिद्राको विवाह नभएको भन्दै इन्कार गरिन् । बिहे गरेपछि मात्रै उनको बिहे हुन्छ ।
तब भगवान विष्णुले गरिबालाई सोध्नुभयो, मलाई भन तिमी कस्तो बेहुला लिन चाहन्छौ, म त्यही दुलहा खोज्दैछु । तब गरिबले भनिन् कि हे भगवान, मेरो लागि यस्तो पति खोजिदिनुहोस् जो देवकुल वा मानवकुलको हो तर विवाह पछि कहिल्यै पूजा गर्दैन।
मलाई पनि कसैले पूजा नगर्ने ठाउँमा आश्रय दिनुहोस्। गरिबाले नारायणले पूरा गर्न नसक्ने गरी बुझेर यस्तो शर्त राखेकी थिइन् । बिहेपछि पुजा त्यागेर नर्क जान तयार हुने देवकुल वा मानवकुलको दुलहा कस्तो होला ?
उनी दुलहा पाउन मुस्किल छ र म अविवाहित नै बस्न पाउने पक्का भयो भन्ने भइन्। अर्को तर्फ भगवान विष्णुले गरिबाका लागि दुलहा खोज्न थाले र अन्ततः उनले गरिबाका लागि ऋषि नामको दुलहा भेट्टाए । ऋषि र गरिबाको विवाह भयो। अब गरिबाको अवस्था अनुसार दुवैजना धार्मिक कार्य नगर्ने ठाउँमा बस्नुपर्छ ।
ऋषि आफ्नी पत्नीका लागि उपयुक्त ठाउँ खोज्न निस्किए, तर उनले त्यस्तो ठाउँ कतै पाउन सकेनन्। त्यसपछि उनी लाजमा परे, यो सोचेर कि उनले आफ्नी पत्नीलाई उनको लागि रमाइलो बास पनि पाउन सकेन, र त्यसपछि उनी कहिल्यै फर्किएनन्।
उता, लामो समयदेखि श्रीमान् नभेटिएर पर्खिरहेकी गरिबा विलाप गर्न थालिन् । दिदीको पीडा थाहा पाउने बित्तिकै माता लक्ष्मी पनि असाध्यै दुःखी भइन् र भगवान विष्णुलाई जेठी दिदीको घरपरिवार नमिल्दासम्म मेरो बिहे नगर्ने बताइन् । मेरी दिदिलाई धार्मिक काम नगर्ने ठाउँ चाहिने बताइन् ।
अहिले पृथ्वीमा त्यस्तो ठाउँ छैन। जसका कारण उनका श्रीमान अझै यताउता भइरहेका छन् । मेरो दिदिलाई ठाउँ मिलोस् र उसले आफ्नो जीवन खुसीसाथ बिताउन सकून् भनेर केही उपाय खोज्नुपर्छ ।
लक्ष्मी दुःखी हुँदा भगवान् विष्णुले भन्नुभयो– देवी, तिमीले भन्नु सहि हो । पृथ्वीमा यस्तो ठाउँ पाउन सम्भव छैन, त्यसैले म प्रयास गर्न सक्छु। तर म मेरो प्यारो निवास गरिबाका लागि पिपलमा मात्र दिन्छु।
तर उनले यो स्थान आइतबार मात्र पाउनेछन् । आइतवार पिपल त्याग्छु। मसँगै सबै देवताले पनि आइतबार पिपल त्याग्नेछन्। त्यस दिन पीपलमा गरिबा र उनका पतिको पूर्ण अधिकार हुनेछ।
श्रीहरिले बताएको यो उपायले लक्ष्मीजी प्रसन्न भइन् । त्यसबेलादेखि आइतबारदेखि पीपलमा गरिबा र उनका पतिको शासन हुने जनविश्वास छ । आइतबार पिपलको रूखबाट सबै देवी–देवताहरू निस्कने भएकाले आइतबारको दिन पीपलको पूजा गर्न निषेध गरिएको छ।
भनिन्छ कि यदि कसैले आइतबार पीपलको पूजा गर्छ भने उसको जीवनमा गरिबी आउँछ। जसका कारण उनले धेरै समस्याको सामना गर्नु परेको छ ।
धार्मिक ग्रन्थका अनुसार पीपल विष्णुको स्थान भएकाले पीपलको रुख काट्न डराउँछन् । तर कहिलेकाहीँ पीपलको रूख काट्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसपछि आइतबार मात्र काट्न सकिन्छ। यसबाहेक अन्य दिनमा काट्न निषेध गरिएको छ।